काठमाडौंमा बसेर राष्ट्रवादी कुरा गर्ने भन्दा मधेसी नै बढी राष्ट्रवादी छन्ः फोरम नेता साह (भिडियो) | नेपाल आज
काठमाडौंमा बसेर राष्ट्रवादी कुरा गर्ने भन्दा मधेसी नै बढी राष्ट्रवादी छन्ः फोरम नेता साह (भिडियो)
'रक्षाकवच बनेर यो देशको सीमा जोगाउने मधेसी नै हुन्'
सोमबार, २२ माघ २०७४ गते प्रकाशित
काठमाडौं । संघीयता नेपालमा २ नम्बर प्रदेशलाई विशेष चासोको रुपमा हेरिँदैआएको छ । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदैआएका मधेश केन्द्रित दलहरु चुनावपछि २ नम्बर प्रदेश सरकार बनाउन जुटेका छन् ।
यही परिवेशमा नेपालआजले मधेश केन्द्रीत दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका एक प्रभावशाली नेता तथा प्रदेश नम्बर २ का सांसद शैलेन्द्र साहसँग पार्टीको भावी रणनीति, मधेशका मुद्धा, प्रदेश सरकार निर्माण जस्ता विषयमा बहस गरेको छ ।
चुनावलाई आन्दोलनकै एक चरणको रुपमा प्रयोग गरेको बताउने संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका नेता साहले राज्यको विभेदकारी नीतिलाई निस्तेज गर्ने गरी मधेशको विकास गर्ने बताएका छन् ।
अन्तरवार्ताको क्रममा साहले धेरै मधेशी समुदायको रगतको बलिदानी भए पनि उपलब्धि नभएको बताए । मधेसको मुद्धालाई केही समय थाती राखेरै आफूहरु निर्वाचनमा गएको उनको भनाइ छ ।
‘सिके राउतले उठाएको मुद्धामा तपाईँहरुको कस्तो राय छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उनले पहिचानको मुद्धा उठाउँदैआएका छन्, राज्यले सम्बोधन गरेका भए यस्तो दुर्दशा हुने थिएन ।’ उनले थपे, ‘पहिचानको मुद्धा उठाउँदै आएका छन् उनी, हामीले उठाएका मुद्धा राज्यले सम्बोधन गरिदिएको भए सिके राउतको मुद्धा यसरी उठ्ने थिएन । राज्य नै गैरजिम्मेवार भएर यस्तो दुर्घटना भएको हो ।’
मधेशप्रति एमाले लचिलो भएको हो त ?
यस विषयमा साहले सकारात्मक जवाफ दिए । ‘एमाले मधेशप्रति लचिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘एमालेप्रति हाम्रो कुनै रोषदोष छैन, माग सम्बोधन भए, एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
प्रचण्ड कि ओली ?
केही मधेशी नेताले केपी ओलीभन्दा प्रचण्ड लचिलो नेताको रुपमा औँल्याएका छन् । तर साहले मधेशको मुद्धा जसले सम्बोधन गर्छ त्यो नै लचिलो नेता हुने बताए । देशमा एमालेको सरकार बन्ने पक्कापक्की भएकाले आफ्ना माग पूरा गर्ने बाचा गरे सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
विकासको खाका के छ ?
विकासबारे फोरमले पनि अब प्रष्ट रुपमा आफ्नो खाका तय गर्नुपर्ने छ । यसअघि आन्दोलनमा भए पनि अब प्रदेश हाँक्ने जिम्मा पाएकोले जिम्मेवारी पनि उसको काँधमा परेको छ ।
साहले यस विषयमा आफ्ना धारणा नेपालआजसँग राखे । ‘जनकपुरको भेटीले दुई नम्बर प्रदेश चल्दैन । दुई नम्बर प्रदेश हरेक प्रकारले पछाडि परेको छ । राज्यले विशेष रुपमा यो प्रदेशलाई विकास गर्नका लागि स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका थुप्रै समस्या छन् ।’ उनले बताए ।
यस्तै रोजगारीका लागि थुप्रै विदेसिएका युवाको लागि लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याउने उनको भनाइ छ । साहका अनुसार तराईका समस्याको प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
साहले फोमको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग भावी दिनहरुमा एकता हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । दुबै पार्टी तराई केन्द्रित भएकाले र दुवैको मुद्धाको प्रकृति एकै किसिमको भएकाले एकताको सम्भावना रहेको उनले बताए । तर, यस विषयमा आन्तरिक छलफल हुनुपर्ने साहको धारणा छ ।
पहाडीयालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
फोरमको आन्दोलन मधेस सस्याको बारेमा भएको बताउँदै उनले पहाडी समुदाय र तराईबासी भनेर नछुट्याएको बताएका छन् । ‘यहाँको समस्याका बारेमा हामीले आन्दोलन गरेको हो ।’ उनले थपे, ‘यहाँका पहाडीया समुदाय वा तराईबासी भनेर छुट्याएको होइन खस, आदिबासी, उत्पीडित सबैका समस्या हामीले समेट्नेछौँ ।’